यो बर्ष करिब ७० हजार टन कम धान उत्पादन – NewsAgro.com
December 29, 2017 December 29, 2017 newsagro0Comments कृषि विकास मन्त्रालय, धान, यो बर्ष करिब ७० हजार टन कम धान उत्पादन
काठमाडौं, १४ पुस । कृषि विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष उत्पादन भएको धानको तथ्यांक लुकाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष गत आवको तुलनामा उत्पादन बढ्ने बताउँदै आएको मन्त्रालयले वास्तविकता लुकाएर तथ्यांक तोडमतोड गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यस वर्ष उत्पादन घटेपछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा इतिहासमै सर्वाधिक परिमाणमा धान उत्पादन भएको थियो। मन्त्रालयले गत वर्षको रेकर्डलाई पनि उछिनेर यो वर्ष दुई लाख ६१ हजार टन बढी धान फल्ने घोषणा गरेकोे थियो। मन्त्रालयले बाढीपछि पनि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै उद्घोष गरेको थियो।
मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष गत वर्षको तुलनामा करिब ७० हजार टन उत्पादन घटेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब ५१ लाख ६० हजार टनको हाराहारीमा मात्रै धान उत्पादन भएको छ। ‘मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘गत वर्षको धान उत्पाद रेकर्ड यो वर्ष तोडिन्छ भन्ने उद्घोष गरे पनि यो वर्ष करिब ६५ देखि ७० हजार टन कम परिमाणमा धान उत्पादन भएको छ। मन्त्रालयले धान उत्पादनको वास्तविक तथ्यांकलाई तोडमोड गरी गत वर्षको तुलनामा केही थोरै भए पनि बढी उत्पादन भएको भनेर सार्वजनिक गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ।’
मन्त्रालयले चालू आवमा ५४ लाख ९१ हजार टन धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। आव २०७३/७४ मा ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष वास्तविक रूपमा कति परिमाणमा धान उत्पादन भएको छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयका सचिव डा.सुरोज पोखरेल, प्रवक्ता डा. योगेन्द्र कार्की र कृषि विभागका महानिर्देशक डा. डिल्लीराम शर्मासम्म बोल्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरू एकले अर्को अधिकारीसँग ‘बुझ्नुसु भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएका छन्। तीन जनामध्ये कोही पनि वास्तविक तथ्यांकसहित आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न तयार छैनन्।
चालू आर्थिक वर्ष गत आवको तुलनामा उत्पादन बढ्ने बताउँदै आएको मन्त्रालयले वास्तविकता लुकाएर तथ्यांक तोडमतोड गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम परिमाणमा आएको धानको उत्पादन तथ्यांकलाई ‘मिथु बनाएर मन्त्रालयका उच्च अधिकारी ‘बढीु बनाएर सार्वजनिक गर्न खोज्दैछन्। ‘त्यही भएर यो वर्ष मन्त्रालयले धानको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि निकै ढिलाइ गर्दै आएको छु, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा करिब ८० हजार हेक्टरमा धानबाली लाग्न सकेन। यसका कारण धानको उत्पादनमा कमी आएको हो। मन्त्रालयले भने धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको दाबी गरेको छ।
प्रवक्ता कार्कीले भने,‘उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भएको छ, प्रतिहेक्टर तीन दशमलव तीन टनबाट वृद्धि भएर तीन दशमलब पाँच टनमा पुगेको छ। उत्पादन र क्षेत्रफलको विषयमा जिल्लाबाट तथ्यांक आउन बाँकी भएकाले तत्कालै भन्न मिल्दैन।’ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा धान रोपाइँको सुरुआती समयमा तराईका जिल्लाका किसानले सिँचाइ अभावमा सुख्खाबाट पीडित बनेका थिए। यसका कारण उक्त क्षेत्रमा निकै ढिलो गरी रोपाइँ सुरु भएको थियो। रोपाइँ सकिनै लाग्दा अविरल वर्षापछि आएको ठूलो बाढीका कारण धान उत्पादनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको हो।
बाढी र सुख्खाका कारण यो वर्ष तराईकै जिल्लामा निकै कम परिमाणमा धानको उत्पादन भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। बाढीका कारण तराईका २० जिल्लाको धान रोपाइँ भएको ८० प्रतिशत क्षेत्रफल डुबानमा परेको थियो। यसका साथै बाढी पीडित किसानलाई राहत अनुदानमा वितरण गर्ने भनिएको प्रांगारिक मल पनि सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्दा उत्पादनमा कमी आएको हो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको करिब ३५ प्रतिशत र धानले मात्रै करिब २० प्रतिशत योगदान पु‍र्‍याउँदै आएको छ। धानको उत्पादन घट्दा आर्थिक वृद्धि दर पनि घट्ने आशंका गरिएको छ। धान उत्पादनमा तराई क्षेत्रले करिब ८० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ। नेपालको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ५०.२ प्रतिशत जग्गामा धानखेती हुन्छ। यसमध्ये तराईमा ६९.१ प्रतिशत, पहाडमा २६.८ प्रतिशत र उच्च पहाडी क्षेत्रमा ४.१ प्रतिशत हेक्टरमा धानखेती हुन्छ।
बर्सेनि २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल भारत, इटाली, बहराइन, चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापान, मलेसिया, बंगलादेश अमेरिका, सिंगापुर र भियतनामबाट आयात हुँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ६ अर्ब ८६ करोड २४ लाख मूल्यबराबरको चामल नेपालमा आयात भएको छ।
← शनिबार बिशेष : यसरी गरौं सुन्तलाको खेती
कृषि वस्तुको आयात घटाउन बाँझो जग्गा सदुपयोग गर : बिज्ञ →